28 / 04 / 2021 28 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 597 Views စာ0မှတ်ချက် ၅၀၁st Legion, 75280 501st Legion Clone Troopers များ, AT-RT ကို, တည်ဆောက်, Droideka, Lego, Lego တည်ဆောက်, Lego Star Wars, စတုတ်ထမေ, သတင်းလွှာ, Star Wars, Star Wars: အဆိုပါ Clone စစ်ပွဲများ, Star Warsဖြေ, အဆိုပါ Clone Wars, အဆိုပါ Mandalorian
ငါတို့ p ကိုထုတ်တော့မယ်artကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံအဘို့အစာရင်း Lego Star Wars AT-RT, ဒါကြောင့်မင်းတို့ရဲ့လက်တွေကိုနှိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့သတင်းလွှာကိုစာရင်းသွင်းပြီးသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ parts စာရင်းအားလုံးကို .xml format ဖြင့်ဖြန့်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာမှတစ်ဆင့်သီးသန့်ဖြန့်ဝေသည်။ ၎င်းသည် desktop စာမျက်နှာပေါ်ရှိဤစာမျက်နှာ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းပေါ်ရှိစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်သင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ ဖိုင်များသည် BrickLink သို့တိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်မိတ္တူကိုစုစည်းရန်လိုအပ်သောအပိုင်းများကိုမှာယူနိုင်သည်။ AT-RT ကို 501st Clone Troopers.
ဒီ list က p နဲ့လည်းကစားနိူင်တယ်art အရောင်များနှင့်အရေအတွက်၊ သင်က AT-RTs သက်တန့်စစ်တပ်တစ်ခုတည်ဆောက်လိုပါကသို့မဟုတ်အခြား Clion Army အတွက်သင့် Clone Army ကိုရိုးရှင်းစွာအလိုရှိပါက (အကယ်၍ သင်လုပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားပုံတစ်ပုံပို့ပေးပါ။ ) ။ ယနေ့Aprilပြီ ၂၈ ရက်၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ညနေ ၄ နာရီတွင်အီးမေးလ်ပို့ပါမည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း၌သတိထားပါ။
သငျသညျ p ရရှိပါသည်ပြီးတာနဲ့artလက်ရှိ s - BrickLink မှအမှာစာသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှုထဲမှထုတ်ယူခြင်း - AT-RT မည်သို့ပူးပေါင်းနေသည်ကိုကြည့်ရှုရန်အထက်ပါဗီဒီယိုပေါ်တွင်ကစားခြင်းကိုနှိပ်ပါ။ သင်လည်းမိတ္တူတစ်စောင်လိုချင်ဖွယ်ရှိသည် 75280 501st Legion Clone Troopers များ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တည်ဆောက်စီးရန် minifigures သည်။ (ကျွန်ုပ်တို့၏ဗွီဒီယိုတွင်ပြုလုပ်ထားသော ARF Trooper သံခမောက်ကိုအသုံးပြုသည် Clone ကြည်းတပ်အကောက်ခွန်နှင့်မှတဆင့်ဝယ်ယူခဲ့သည် Firestar ကစားစရာ.)
အကယ်၍ သင်သည်ဤပုံပြင်ကိုကန ဦး p ပြီးနောက်ရှည်လျားစွာရှာဖွေတွေ့ရှိပါက၊artကြောက်လန့်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ စာရင်းပြုစုထားသောသတင်းလွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ p အားလုံးကိုရည်ညွှန်းသည်artကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထုံးစံများအပါအဝင်များစာရင်း Mandalorian အမြန်စက်ဘီး နှင့် Droideka - ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သောသတင်းလွှာတိုင်း၏အဆုံးမှာ၊ နောက်လာမည့်သတင်းအတွက်အချိန်မီစာရင်းသွင်းရန်သေချာပါစေ။
အားလုံးနှင့်အတူမေလစတုတ္ထကမ်းလှမ်းမှုများကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံစာမျက်နှာနှင့်ထိုအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Star Wars ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့်သတ်မှတ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← My Chemical Romance ဂီတာသမားသည် LEGO ကိုမောင်းနှင်သည် Ideas 10K မှစီမံကိန်း
အခမဲ့ LEGO Speed Champions ၂၀၂၁ Top Gear မဂ္ဂဇင်းနှင့်တွဲထားသည် →